Rasaasa News – Jijiga oo Xaawo Cismaan Taalo Looga Dhisayo
on April 18, 2014 12:52 am
Jijiga, Apr 18, 2014 – Warar ka soo baxaya degaanka Somalida Atobiya, ayaa sheegaya in dhawaan laga taagi doono magaalada Jijiga taalo loo dhisayo Xaawa Cismaan [XaawoTaako]. Xaawo Taako waxay ka mid ahayd halgamayaashii ka qayb galay halgankii xornimodoonka Somalida, waxayna ka soo jeeday magaalada Jijiga. Taalo lagu xasuusto waxqabadkeedii ayey ku lahayd badhtamaha magaalada Moqdisho, halkaas oo la fujistay taaladeeda xiligii ay socdeen dagaal beeleedyadii Somalida.
Dawlada degaanka Somalida Atobiya ee uu hogaamiyo Cabdi iley, oo u kabo gashatay soo noolaynta taariikhda iyo halgankii Somalida, ayaa dhawaan waxay ka taagtay badhtamaha magaalada Jijiga, taalada halyey Sayyid Maxamed Cabdile Xasan.
Talo ay soo jeediyeen odayaasha degaanka, gaar ahaan kuwa magaalada Jijiga ayey dawlada degaanku dhawaan ka aqbashay in ay ka dhisayso taalada Xaawo Taako magaalada Jijiga. Taalada ayaa la sheegay in lagu dari doono miisaaniyada sanadka dambe, iyada oo loo saaray gudi soo diyaariya qiimaha lacageed iyo qaabka taalada.
Taalooyinka ku yaal magaalada Jijiga waxay noqon doona saddex, marka la dhiso taalada Xaawo Taako, oo dhismaheeda dawladu balan qaaday. Laakiin dawladu waxay diiday in lagu daro Sayyidka iyo Xaawo Taako manhajka taariikhda ee lagu barto dugsiyadda degaanka Somalida.
Dawlada degaanka ee madaxda ka yahay Cabdi Iley, ayaa hore u balan qaaday in ay baadhid ku samayn doonto taariikhda Sayyid Maxamed Cabdile Xasan, iyada oo hore u sheegtay in ay heshay taariikh cusub oo aan hore loo haynin. Wali ma jiraan soo bandhigid waxyaabaha cusub ee madaxwaynuhu sheegay soo bandhigooda.